Etu esi lelee Metro PCS Text Text & Call History Online (Mmelite 2021)
TIL | Lelee Akwukwo Nso ederede ederede PC PCS na Akuko Oku na Ntaneti (Ntughari 2021)
Emelitere ikpeazụ na Disemba 8, 2020 nke Jason Ben dere
Metro PCS, onye bụbu General Wireless, bụ onye na-eweta netwọkụ US na-ewu ewu maka ịntanetị, ekwentị, na ekwentị. Ndị na-enweghị mmasị na mmemme ekwentị ọdịnala dịka T-Mobile nwere ike ịhọrọ ekwentị akwalitero site na Metro PCS. Site na ọrụ ịntanetị ha, ndị ọrụ nwere ike ịlele akụkọ ihe mere eme oku Metro PCS, soro ekwentị kpọọ, lelee ederede ederede, ma lelee ụgwọ ha n'etiti ọrụ ndị ọzọ.
N'isiokwu a, anyị nwere ụzọ abụọ maka gị iji lelee Record PC Metro. Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ Metro PCS dị irè, ị nwere ike ịlele ndekọ ahụ na saịtị gọọmentị Metro PCS. Y’oburu EGO akaụntụ dị irè na ehichapụrụ ekwentị ndekọ ekwentị gị (iPhone ma ọ bụ ekwentị gam akporo), mgbe ahụ ịnwere ike iji ngwaọrụ ndị weghachite ihe ndekọ ahụ.
Ntugharị ọsọ ọsọ:
# 1 Lee Metro PCS Ekwentị ekwentị & Kpọọ log Online (Akaụntụ PC PCS chọrọ)
# 2 Lelee Record PC Ekwentị Metro site na Naghachi SMS & Oku ndekọ site na ekwentị (-atụ aro)
Etu elele Ekwentị Ekwentị Metro PCS Ekwentị
Iji lelee akụkọ ozi ederede nke PC PCS, ndekọ ekwentị, ma jiri atụmatụ ndị ọzọ, ị ga-atọlite ​​akaụntụ intanetị Metro PCS nke intanetị.
# 1 Settọlite ​​Mkpesa Ihe Ntanetịsị Ihe Ntanetị Metrontanetị PCS
Iji melite akaụntụ CS PCS nke ịntanetị gị, banye na ebe nrụọrụ weebụ ha ma debanye aha na ngalaba “Akaụntụ M”. Tinye ozi ịkpọtụrụ gị site na ịnye nọmba ekwentị, aha njirimara, na paswọọdụ. Nke a na-enyekwa aka ma ọ bụrụ na ekwentị gị tufuo ma chọọ soro ya. Can nwere ike iji otu akaụntụ maka ọtụtụ ekwentị PC PCS ma ọ bụrụ na ịnwere karịa otu maka njikwa enweghị nsogbu.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịmekọrịta ekwentị Metro PCS gị na kọmputa gị. Nke a ga - enyere gị aka ịlele akụkọ ederede ederede PCS metro na ndekọ ekwentị ekwentị Metro PCS ọbụlagodi na ịnweghị ekwentị gị. Jiri USB jikọọ ekwentị gị na PC gị ma soro ntuziaka enyere. Windows ga-akpali gị na ntọala iji melite dabere na ekwentị gị.
# 2 Lelee ozi Ekwentị Metro PCS gị n'ịntanetị
Ilele ozi ederede gị, ndekọ ekwentị ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme oku kwesịrị ịdị mfe ozugbo ịmekọrịta ekwentị gị na PC. Ọ bụ ezie na ịnwere ike weghachite ozi na igbe mbata gị na mbata gị site na akaụntụ ịntanetị gị, nke a agaghị ekwe omume mgbe ihichapụ ozi ndị ahụ na ekwentị. Ga-enwe ike ịhụ isi mmalite nke ozi ederede.
Kwụpụ 1: Bugharịa ihe nrụpụta òké gị “nkwado" Ọzọkwa "Akaụntụ M”. Tinye Zipcode nke ọnọdụ dị ugbu a wee “malite".
Kwụpụ 2: Tinye aha njirimara na paswọọdụ gị, ma ọ bụrụ na i chefuola nkọwa ndị a echegbula. Pịa “Chefuru Aha ojii / Paswọọdụ”Ị ga - enwe nhọrọ nrụpụta e-zitere gị.
Kwụpụ 3: Họrọ "Lelee Ozi ohuruAnd ga-enwe ike ihu ozi niile dị na ekwentị gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ederede na ozi data maka ozi ehichapụ họrọ “Ihe Omume a"Mgbe ahụ"data”. You ga-enwe nkọwa (nọmba ekwentị, ụbọchị na oge) nke ozi egosiputara na enyo gị.
# 3 Kedu ka m si elele Akụkọ ihe mere ebe m na PC PCS na Akaụntụ M
Mgbe ịbanye na akaụntụ gị gaa “Arụ ọrụNaNkọwa oku”Iji họrọ ahịrị ekwentị ịchọrọ ilele akụkọ ihe mere eme oku. Oku ana-akpo oku ma natakwa ga-egosi n'ihuenyo. Iji hụ nkọwapụta oge na ọnụahịa oku akpọrọ, pịa “Azụmaahịa ego na iji"Taabụ.
Oleghara ilele ndekọ ndekọ ekwentị ekwentị gị / ehichapụ MetroS PC? Gbalịa weghachite ha n’ekwentị gị. Guo usoro dika okpuru.
Etu esi lee Record PC RecordS ekwentị site na Naghachi SMS & Oku ndekọ site na ekwentị
Ọ bụrụ na ịnweghị akaụntụ PC PCS bara uru ma ehichapụ ihe ndekọ ekwentị ekwentị ndị ahụ na ekwentị ịnwere. ị nwere ike ịlele Akụkọ Mkpuchi Text Metro nke PCS na Akụkọ Oku site na ị napụta ha site na ekwentị Metro PCS gị nwere usoro ngwa ngwa ọzọ.
Lee ndị kachasị mma Iweghachite Data Data iPhone na Iweghachite Data Weghaara n'ahịa. Site n’enyemaka nke ngwa anwansi ndị a, ị nwere ike weghachite Mkpokọ ekwentị PCS Migha ma ọ bụ nke echefuru echefu na ozi ederede ole na ole ọbụla ekwentị gị furu efu / gbajiri / mmiri mebiri emebi / nke jụrụ oyi.
Free Download iPhone / gam akporo Data Iweghachite Ebe a:
Zụta iPhone / gam akporo Data Iweghachite Ebe a:
-N'ihi na onye ọrụ iPhone
Pịa ka ịmụtakwuo nke a:
Olee otú iji naghachi-ehichapụ oku log na iPhone
-N'ihi na onye ọrụ gam akporo
Android SMS Iweghachite
Iweghachite Akụkọ oku gam akporo
Ihe ndekọ njirimara ọ bụla nke PC PCS dị n'ịntanetị nwere ikike iji akara ndekọ ekwentị ekwentị PCS ma lee akụkọ ederede ederede. N'agbanyeghị ma ị nwere akaụntụ dị mkpa ma ọ bụ nke ejiri kwalite, ịnwere ike ịlele akụkọ ịkpọ oku gị. Nanị ihe dị iche bụ na oge edepụtara ga-adị mkpụmkpụ maka akaụntụ nnabata ma ọ bụrụ na e jiri ya kwalite. Mgbe izizi ịdekọ akaụntụ intaneti gị, ị nwere ike ịchọpụta ma ozi ederede ma ọ bụ akụkọ ihe mere eme na-arụ ọrụ site na ịrịọ mmadụ ka ọ zi ozi ma ọ bụ kpọọ gị.
Etu ị ga-esi nwetaghachi data sitere na iPhone echefuola / ezuru ya na 2018
[iPhone gbadoro na mmiri] Etu esi edozi mmiri mebiri emebi iPhone
Nyocha 5 kachasị mma gam akporo Data Recovery
iPhone White ihuenyo ọnwụ? Ebe a bụ ndozi
Nzọụkwụ 3! Enwetaghị atingghọ aghụghọ ule site na Naghachi ederede ehichapụ [mmelite 2018]
Etu ị ga-esi nweta aghụghọ na Facebook ozi site na Naghachi Ozi Mmekọ
[WhatsApp Cheating] Otu esi agụ Di m Ederede WhatsApp ederede
Naghachi ekwentị ehichapụ
Gụọ Ozi Verizon n'ịntanetị
Iweghachite WhatsApp Ozi
Nkwado ndabere na mpaghara WhatsApp (enweghị iwepụ)
Weghachi WhatsApp ndabere na Google mbanye
Ozi nkata ozi
Nweta Facebook Photo / Post
Naghachi Facebook Facebook
Iweghachite Ozi Nhazi Instagram Direct
Iweghachite data Instagram
Iweghachite foto osisi
Onwe-ewepu Foto Iweghachite
Ehichapụ Oku ndekọ Iweghachite
Naghachi Onye ehichapụ video
Otu esi weghachi kọntaktị